Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tiana hambara eto dia tsy ny Fiangonana ihany akory no Tempolin'Andriamanitra fa ny tentsika ihany koa dia Tempolin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra mnao hoe "Tsarovy fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo." ary mbola hamafisiny aza izany amin'ny hoe "Izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia hosimbainy koa". Koa amin'izao ary ry havana miova ianao, aza manao ny fanao ratsy intsony. Tandrovy ny maha Tempolin'Andriamanitra ny tenanao.
Ny tranon'Andriamanitra mantsy dia marika aray fa misy Andriamanitra, satria ao anatin'izany no hihaonantsika amin'Andriamanitra, ilay vavahady hidirana any, sy hifanakekezantsika bebekokoa amin'Andriamanitra. Masina izany ka tsy azo zimbazimbaina. Ny zavatra hisarihako kely ny saintsika ry havana dia ireo mpanompo sampy; jereo ny fanajana ny fady rehetra, hajaina tsara izany, nefa ireny tsy miteny, tsy mitahy ny maty, na ny Dadibe na ireo karazana sampy rehetra tompoin'ny olona ireny. Andriamanitra tompointsika dia Andriamanitra velona, mihaino mandrakariva, mamaly, ary rehefa mino tanteraka aza isika dia miresaka mivantana amintsika koa Izy, ary miseho vatana mihitsy aza amin'ny alalan'ny fahitana. Izany ry havana ilay Andriamanitra tsy mitady tambiny, fa omeny maimaim-poana izany. Nefa raha ny amin'izao tontolo izao dia mila tambiny avokoa, raha menome zavatra iray izy dia efa miandrandra tambiny izy ao ambadik'izay. Ohatra amin'izany: raha mampindrana vola ny olona iray dia mitady zanany izy, indrindra fa amin'izao fiainana sarotra izao, izay lazaina fa kirizy hoy ny maro. Tsy vahaolana anefa ny fanaovana ireny, fa ny lalana tsara indrindra dia ny ao amin'ny Tompo irery ihany, tsy manary anao izy na aiza na aiza toerana misy anao. na inona na inona olana mianjady aminao; vonona mandrakariva ny Tompo. Indraindray mantsy isika ry havana variana miondrika, araka ilay hira iray manao hoe: "Tsy misy nateraka ny ho resy, miondrika foana mijery ny tany." Ny zanak'Andriamanitra ry havana tsy toa izany, manana fanantenana mandrakariva, manana tanjona tsara, na dia eo aza ny fahoriana mahazo azy, tsy mora kivy sy tsy moraketraka, fa mahery mandrakariva amin'ny alalan'ilay be voninahitra sy Andrian'ny fiadanana. Manana fiadanam-po tokoa izay manana Ilay Andriamanitra, sambatra raha samy sambatra, indrindra fa ny Firenena izay manana an'i Jehovah ho Tompo sy Andriamaniny. Ny Firenena Malagasy na i Madagasikara dia ao am-pon'Andriamanitra tokoa, ary tiany isika, ry Malagasy; aoka isika hitoky amin'Andriamanitra, miandry ny fitodihantsika aminy fotsiny isika dia ho afaka eo ambany vahoan'ny satana. Mahatsiaro manana adidy amin'ny fanavotana ny firenena isika rehetra izao, ny vahaolana dia ny fiverenana aminy. Koa matokia azy ary mivavaha ka aza mitsahatra fa hohitanao ny voninahitr'Andriamanitra.
Ny fahasoavana amam-piadanany anie hoaminareo mandrakariva, ary ny voninahitra dia ho azy irery ihany, izay efa azy hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay.
Ny Tompo dia tsara tokoa sady mpanao ny tsara mandrakariva hoan'izay olona matoky azy, indrindra fa ireo olona izay tsy mbola ao aminy dia tiany ihany koa satria tsy misy tiany ho very isika rehetra i